कारागार भित्रै नेपाली हिटलर अलामले १५ सय कैदीको भीडमा यसो पो गरेछन् ! — Imandarmedia.com
कारागार भित्रै नेपाली हिटलर अलामले १५ सय कैदीको भीडमा यसो पो गरेछन् !
काठमाडौं। रौतहटको राजपुर काण्डका आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद महमद अफ्ताव आलमलाई हाल राजधानीको नख्खु कारागारमा १५ सय कैदीसँगै राखिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएलगत्तै आलमलाई रातारात नख्खु कारागार ल्याइएको थियो ।नख्खु कारागार प्रशासनले आलमलाई सामान्य कैदीलाई जसरी नै राखिएको जनाएको छ ।
नख्खु कारागारका प्रमुख सुरेन्द पौडेल आलमलाई कुनै अत्तिरिक्त सेवा सुविधा नदिइएको बताउँछन् । ‘यो कारागारमा १५ सय कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये आलम पनि एक हुन् । सामान्य कैदीलाई जसरी राखिन्छ, त्यसरी नै राखिएको छ,’ कारागार प्रमुख पौडेलले राजधानीसँग भने । नख्खु कारागारमा तीन बन्दीगृह छन् । प्रत्येक बन्दीगृहमा ५ सयका दरले कैदीलाई व्यवस्थापन गर्दै आइएको कारागारले जानकारी दिएको छ । बन्दीगृहभित्र कैदीलाई ५ देखि ७ जनाको समूहमा राख्ने गरिएको छ । आलमलाई पनि ५ देखि ७ जना रहने कोठामा राखिएको छ ।
जुन समूहमा खाली हुन्छ, सोहीअनुसार कैदीलाई स्थान उपलब्ध गराउने गरिएको छ । दुई दिनको जेल बसाइमा आलमले कुनै शंकास्पद व्यवहार नदेखाएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । कारागारले कैदी भेट्न १० देखि ४ बजेसम्मको समय छुट्टाएको छ । यस अवधिमा आलमका केही आफन्त कारागारमा भेट्न आएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । पूर्वराज्यमन्त्री नवीन विश्वकर्मा र सञ्जय टकलासमेत नख्खु कारागारमा जेलजीवन व्यतीत गरिरहेका छन् ।कारागार व्यवस्थापनले आलमलाई कुनै विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । यो खबर केशवप्रसाद पाण्डेले राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्मकै बढी ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कोरोनाबाट नेपालमा आज मात्रै यति धेरै मानिसको मृत्यु, कहाँ कति ?